"Dad gaaraya 2.5 milyan qof ayaa weli u baahan gargaar bani'aadamnimo, waxaan kaloo ognahay in 1.9 milyan qof oo kalena ay u baahan yihiin in laga kaalmeeyo wax soo saarka si ay noloshooda u maareeyaan, haddii aysan taasi dhicinna ay dib ugu noqonayaan xaaladihii foosha xumayd," ayuu yiri Mark Bowden.
Sidoo kale, xiriiriyaha gargaarka bani'aadamnimo ee Soomaaliya wuxuu sheeagay in loo baahan yahay 576 milyan oo doollar si loo sii wado caawinta dadka gargaarka u baahan ee ku barakacsan gudaha dalka Soomaaliya.
"Xaaladda ka jirta Soomaaliya weli waa mid adag, balse waxay u baahan tahay in lala sacdo," ayuu yiri Bowden oo sheegay inay socdaan qorshayaal lagu caawinayo dadka u baahan inay gargaarka aadamnimo.
Dhanka kale, sarkaal ka tirsan hay'adda UNOCHA oo isaguna shirkaas jaraa'id hadal ka jeediyay ayaa sheegay inay jiro arrin ay walaac ka qabaan oo ah in horjoogayaasha kaamamka ay horjoogsadaan in gargaarku uu gaaro dadkii loogu talogalay.
"Runtii waa mid walaaceeda leh - horjoogayaasha kaamamka ku yaalla Muqdisho oo horjoogsada in dadka tabaaleysan uu gaaro gargaarka loogu talogalay," ayuu yiri sarkaal kale oo OCHA ka tirsan, isagoo sheegay inay tegi doonaan kaamamka ku yaalla magaalada Muqdisho, maadaama ay xaaladda ammaan tahay mid caadi kusoo laabatay.
Hadalka saraakiisha UNOCHA ayaa wuxuu imaanayaa xilli la sheegay inay cunno-yari ba'an ka jirto gobollada Koonfurta Soomaaliya, taasoo laga baqdin qabo inay mar kale sababto in dadku ay deegaannadooda ka barakacaan.